Shirka Madasha Wada-tashiga oo dhawaan soo saarayo Jadwalka doorashada – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 August 4 Shirka Madasha Wada-tashiga oo dhawaan soo saarayo Jadwalka doorashada
Shirka Madasha Wada-tashiga oo dhawaan soo saarayo Jadwalka doorashada
Posted on August 4, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, August 4, 2016: Go’aan ka gaarida Madasha Wada-tashiga oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo, iyadoo go’aan laga gaari doono xilliga ay doorashada dhacayso.
Madaxda Madasha, oo dadka qaar ay u yaqaaniin Hogaamiye Kooxeedyada, ayaa wali isku afgarin mudada dib loo dhigayo doorashada, balse waxaa jira soo jeedino kala duwan oo waqtiga doorashada la qabanayo ku aadan.
Ujeedooyinka laga doodayo ayaa ah kuwo farsamo, waxaana Madaxda dowladda Dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada la sheegay inuu waxooga is jiid jiid ka dhaxeeyo, gaar ahaan arrinta la xiriirta sameynta Guddiyada doorashada wadaya, sida Guddiga khilaafaadka iyo Guddiyada doorashada heer maamul goboleedyada.
Warar horu dhac ah oo la helayo ayaa sheegaya in doorashada dib loo dhigi doono, ilaa hal bil ama labo bil, si howlaha harsan lagu qabto deg deg.
Arrinta kale ee muhiimka ayaa ah dhaqaalaha ku baxaya doorashada, kaasoo aan wali la isku raacin, waxaana shirka maanta goob joog ka noqon doona Beesha Caalamka oo shalay furitaankiisa ka qeyb gashay, isla markaana ka soo tagtay.
Dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka ayaa waxaa bixinaya Beesha Caalamka, balse waxaa la ogeyn qiimaha ku baxaya doorashada, mana jirto wax la isku raacay ama dhaqaale la soo bandhigay, balse waxad mooda in koox kasta ay ku maqantahay sidi ay u heli-lahayd Foolbaxsi ayada gaar u ah
Gaashan-buurta Madasha Wada-tashiga qaran ayaa xalay kulamo gaar gaar qaatay, iyadoo la sheegay in qodobo dhowr ah oo dhinaca farsamada isku afgartay.
Gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in shirka laga soo saaro war murtiyeed ku saabsan xilliga ay dhaceyso doorashada ama ay baaqanayso.
Xamar wax kasta ayaa ka suurta gasho.
Musharaxiinta Mucaaradka oo ku gacan seyray go’aanka Gobolka Banadir September 19, 2016
Gaas iyo Galmudug December 7, 2015
ARE THE CANADIANS LEARNING A LESSON FROM THE TERROR ATTACKS AT SCHOOLS OR IGNORING? January 25, 2016
Why Somaliland now needs international recognition July 20, 2016
VIDEO: Siyaasad cakiran, Axmed Madoobe, gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo doorashada 2016 November 16, 2015
Taliyaha cusub ee ciidamada Booliska oo maanta xilka lagu waeerjiyay April 10, 2017